Clipboard Chero kupi: muchinjikwa-chikuva clipboard application | Linux Vakapindwa muropa
Hapana mubvunzo kuti mazhinji emabasa ekutanga ane sisitimu anokwanisa kuwedzera iwo uye kubvisa kugona kwayo kubva kune wechitatu-bato kunyorera. Uye ino nguva ngatitaurei nezve wechitatu bato Anwendung , que zvichatibatsira kuvandudza basa rekutanga rehurongwa hwedu izvo iro clipboard.
Clipboard Pose pane clipboard application yakavakwa neelectron, izvi zvakasununguka zvachose, zviri nyore uye inogoneswa kuti ikwanise kuyananisa pamwe negore pamwe nekuvandudzwa kwemakopi nekunamatira mashandiro, sezvo ichitipa mukana wekuwana izvo zvemukati pedu clipboard kubva kune chero komputa ine iyo application yakaiswa
Kuona yakagovaniswa ruzivo kuburikidza clipboard, iko kunyorera kunofanirwa kuiswa pazvinhu zvese sezvatotaurwa uye zvakabatana neGoogle kana Facebook account. Kuti upedze kusangana, zvinodikanwa kubvumidza kuwana kwaro kubva mukati meakaundi.
Clipboard Chero kupi ine yakapusa mushandisi interface iyo intuitive yakakwana yekushandisa kutenda kune ayo ari nyore-ekuona-kutonga ayo akwanisa kupa mushandisi chiitiko chakafanana pamapuratifomu ese.
Izvo zvakakosha kuti urangarira izvo Clipboard Chero kupi haisi clipboard maneja app, inongova clipboard app kuburikidza iyo yavanogona kuve nayo zvinyorwa uye mifananidzo yavanoteedzera kune desktop yavo inowanikwa pane avo nhare mbozha uye zvinopesana.
Musiyano uripo pakati pemutungamiriri uye nekushandisa kuri nyore ndekwekuti maneja kazhinji anokwanisa kuchengetedza zvinopfuura chinhu chimwe, chengetedza nhoroondo, zvinhu zvekuwana izvo nhoroondo, nezvimwe.
App iyi yakagadzirirwa avo vanoda mashandiro e clipboard Yakawiriraniswa pasina manejimendi uye zvimwe zvekuwedzera izvo clipboard manejimendi manyorerwo senge CopyQ uye Indicator Bulletin chikepe na.
Clipboard Chero kupi inogona kuve plugin kune avo vanoshandisa maapplication kugovana yavo keyboard uye mbeva nemimwe michina, seSynergy. Sezvo inoona shanduko kune clipboard otomatiki uye mune iri chaiyo nguva, kushanda nayo kunotonhorera zvakanyanya.
1 Clipboard Chero kupi Zvimiro
2 Maitiro ekuisa Clipboard Pese paLinux?
Clipboard Chero kupi Zvimiro
Multi chikuva: Clipboard Chero kupi kunowanikwa kweApple, iOS, Windows, macOS, uye GNU / Linux.
Zvemagariro: Unogona kubatanidza iyi application kune yako Facebook kana Google account.
Kopa zvinyorwa uye mifananidzo ku clipboard mukati me desktop desktop kana kugovana uchishandisa »Kopa kune makore» sarudzo pane nharembozha.
Otomatiki kuwiriranisa pamatanho akabatana.
Anopfuura maviri makomputa panguva imwe chete: Ichi chishandiso hachiganhurwe kumakomputa maviri, unogona kuchibatanidza uye kuwiriranisa makomputa ese aunoda panguva imwe chete uye mune ese iwo anokwanisa kuwana clipboard yeimwe neimwe.
Maitiro ekuisa Clipboard Pese paLinux?
Kuti tiise ichi chikuru chishandiso pane yedu system, Izvo zvinodikanwa kuti isu tiende kune yayo yepamutemo webhusaiti uye kurodha pasi .tar.bz2 faira inoenderana nekuvakwa kwesisitimu yedu, iyo chinongedzo ndeichi.
Kana iwe usingazive iyo dhizaini yako system, unogona kumhanya unotevera kuraira kuti uwane:
Nezve izvi iwe uchaziva kana iwe ukadzora pasuru yemakumi matatu kana makumi matanhatu nematatu. Kana kurodha pasi kwapera, isu tinofanirwa kuvhura terminal uye nekumisa pachedu pane iyo folda patinochengeta iyo yakadhonzwa faira.
Y isu tinoita unotevera kuraira kuti unzip iyo faira rakadzingwa:
Kana izvi zvaitwa, isu tinongofanirwa kuisa iyo inoguma folda uye isu tinofanirwa kungoita unotevera kuraira kunyoresa kunyorera kuchirongwa:
Uye neizvozvo isu tichava nechikumbiro chakawedzerwa kuchikwata chedu uye tinogona kutanga kuchinakidzwa.
Sezvandambotaura, iko kushandisa kuri multiplatform saka unogona kuiwana muGoogle Play neApp Store zvitoro kuti uwiriranise yako smartphone, mapiritsi kana chero chishandiso chine Android kana iOS pamwe nemakomputa ako.
Pasina mubvunzo, ichi chishandiso chakanakisa icho chinokubatsira zvakanyanya kana iwe ukashanda nezvikwata zviviri uye iwe unofanirwa kupfuudza mameseji ruzivo kubva kune rimwe timu kuenda kune rimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Clipboard Pose - Iyo Yambuka-Platform Clipboard App
Kana "ichivakwa" nemagetsi, haigone kureruka
Kune mashandiro ainoita, ini ndinosarudza kuramba ndichishandisa Teregiramu. Ini ndinogadzira yangu yega chiteshi uye pane yega yega kifaa ndichave ndangowana izvo zvandinoteedzera ipapo, kubva pane zvinyorwa kuenda kune odhiyo, hazvina basa kana iri pane yangu nhare, pane desktop yangu vhezheni yeLinux kana paIOS.